Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguLuigi-ApartmentSiena Srls
ULuigi-ApartmentSiena Srls unezimvo eziyi-1706 zezinye iindawo.
Ijikelezwe buhlaza ecaleni kwendlela yewayini kunye neChianti, iVilla Santa Margherita Vacanze ikwindawo entle kakhulu kwabo bafuna ukuphumla kunye nenkcubeko ngohambo lokuya kwizixeko zobugcisa ezinjengeSiena, San Gimignano, Florence kunye neVolterra.
Ijikelezwe yipaki enkulu ebiyelweyo kwindawo enelanga, i-villa inechibi elihle lokuqubha kunye ne-hydromassage (i-6x15 yeemitha kunye nobunzulu ukusuka kwi-1.00 ukuya kwi-2.40 yeemitha) kunye ne-barbecue.
Ichibi labucala elijikelezwe yimithi liyafikeleleka kwiindwendwe kwaye lilungele ixesha lokuphumla kunye nokuthula emthunzini kwiibhentshi ezigcinelwe iindwendwe. Ejikeleze ivilla kukho isidiliya, i-olive encinci kunye negadi yemifuno eqhelekileyo yaseTuscan.
I-villa esanda kulungiswa inamagumbi amane (i-Iris, i-Ninfea, i-Primula, i-Tulipano) inikwe inkathalo kunye nesimbo, nganye inomnyango wangasese kunye ne-terrace yangasese enetafile kunye nezitulo zokutya i-al fresco. Amafulethi axhotyiswe ngazo zonke izixhobo zokwenza ukuba ukuhlala kwakho kube kukhethekileyo kwaye kube mnandi, njengeTV yesathelayithi, indawo yokupaka yabucala, amanzi ashushu, ifriji, i-oveni, igesi, umbane, ukucocwa kokugqibela, ukufikelela simahla echibini lokuqubha kunye nebarbecue.
Amaxabiso efulethini ngalinye afaka isicelo sokuhlala ubuncinci ubusuku obu-7 kwaye abandakanya konke ukusetyenziswa kwamandla (amanzi, igesi, umbane), ilinen yebhedi kunye neetawuli ezinokutshintsha kwelinen yeveki kunye nokucoca okokugqibela. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
I-Staggia Senese yeyona lali ikufutshane (iikhilomitha ezi-4) apho iindwendwe zinokufumana ivenkile enkulu, ikhemesti kunye nebhanki. I-Villa Santa Margherita ibekwe kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiindawo ezininzi zomdla zombini zenkcubeko kunye ne-gastronomic ezifana neMonteriggioni, iSiena, iFlorence, iSan Gimignano, iVolterra, iCastellina eChianti.
I-ApartmentSiena, ejongana nepropathi ngokuthe ngqo, njengabamelwane abalungileyo, iya kuba sezandleni zakho ukukunika ezona ngcebiso zibalaseleyo zokuwonwabela le ndawo kwaye wenze ukuhlala kwakho kube kokhethekileyo.
Ukungena, Ukuphuma, ukuhanjiswa kwelinen, inkonzo yokucoca, uncedo kunye nokugcinwa kuqinisekiswa yi-ApartmentSiena.
Kutheni ukhetha iSanta Margherita Vacanze:
• Idama lokuqubha elinamagumbi okuhlala kunye ne-whirlpool
• isitayile esicacileyo
• iterrace enikeziweyo ngombono
• ingqalelo kwiinkcukacha
• indawo yangaphandle enegadi kunye nechibi
Umbuki zindwendwe ngu- Luigi-ApartmentSiena Srls
Izimvo eziyi-1 708